Meghan Markle iyo Prince Harry waxay safar qarsoodi ah ku tageen Ibiza - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Meghan Markle iyo Prince Harry waxay safar qarsoodi ah ku tageen Ibiza
Meghan Markle iyo Prince Harry waxay safar qarsoodi ah ku tageen Ibiza
Cayayaanka yar yar! Meghan Markle iyo Prince Harry wax walba noogama aysan sheegin fasaxa xagaaga. From The Mirror, Lammaanaha iyo cunuggooda Archie waxay shan maalmood ku hoos jireen qorraxda Ibiza horaantii bishii Agoosto, iyagoo ku safraya diyaarad khaas ah. Joogitaan aan warbaahinta lagu sheegin kahor inta aysan ku soo noqon ciidda Ingiriiska. Qoyska ayaa ka tegi lahaa wax yar ka dib dhalashada Meghan Markle, kaasoo 38 ku jiray bishii Agoosto 4.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Spain, hooyada yar, ninkeeda iyo wiilkeeda waxaa la socday shaqaalahooda amniga. Ma jiraan wax ku cusub qorraxda hoosteeda marka laga eego aragtidan. Annagu garan mayno halka qoysku deggenaa, laakiin The Mirror sharad villa gaar loo leeyahay oo ku yaal meel xasilloon oo ku taal jasiiradda. Buckingham Palace ayaa diiday inay ka hadasho ... Fasaxoodii kadib wuxuu ku sii jeedaa Balmoral, degenaanshaha xagaaga ee boqoradda.
Si Meghan Markle waxay dooratay Ibiza sababta oo ah waxaa laga yaabaa in la khiyaaneeyo intii ay joogtay jasiiraddii hore ee Balearic. Waxay halkaas tagtay 2016 oo leh laba gabar oo saaxiibo ah isla markaana ku soo dhejiyay barta Instagram durbo badan, kuna raaxeysanaya barkadda, koofiyadda iyo quraaradaha ka ilaaliya qoraxda dabka. Safar yar oo ka yar midka ay hadda sameysay, ka dib.
Amiir Harry, Duke of Sussex, iyo Meghan Markle, Uur, Duchess of Sussex, xafladda is biirsaday
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/royautes/meghan-markle-et-le-prince-harry-se-sont-offert-un-voyage-secret-a-ibiza-1012038
Boqortooyada Suubanaha: Meghan sharaf kuma laha Kate, Camilla, Diana, Anne iyo boqoradda
Waan gubay 40 000 $ marijuana bishii - dadku